Ny divay sy ny fisakafoanana koa izao dia azo atao tsara
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Ny divay sy ny fisakafoanana koa izao dia azo atao tsara
Hong Kong dia tanàna misy divay sy fisakafoanana ary iray amin'ireo hetsika malaza indrindra ao amin'ny City of Light, ary amin'ity taona ity dia mandeha virtoaly izy io.
Narindra ny Birao fizahantany Hong Kong (HKTB), ny “Fetiben'ny divay sy divay any Hong Kong” dia tsy hahazo tsiro virtoaly fotsiny fa hanana endrika manerantany ihany koa. Miaraka amin'ny fetibe, fitaovana iray monja no alao sary an-tsaina ny fientanam-po amin'ny verom-boaloboka manjelanjelatra miaraka amina olona antsasaky ny tany na mianatra fomba vaovao hanomanana lovia matsiro avy amin'ny chef ambony - avy amin'ny fiononan'ny seza tianao indrindra izany.
Eto amin'ity tontolo ankehitriny ity dia voajanahary ny mihaona olona amina divay iray vera amin'ny alàlan'ny Zoom. Mifanentana be ny zanak'olombelona, ​​ary raha ny tena izy, ny tontolo virtoaly dia manitatra izao rehetra izao lavitra kokoa. Avy any Hong Kong ka hatrany New York City ka hatrany Monte Carlo ka hatrany Saint Petersburg ka hatrany Afrika Atsimo, ny fetiben'ny divay sy divay any Hong Kong dia azo antoka fa hanelingelina ny tsiro sy ny hetahetam-pontsika eo amin'izao tontolo izao. Ary amin'ity taona ity, satria an-tserasera ny hetsika, dia tena azo atao ny mihaona amin'ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao!
Nanazava ity hetsika stratejika ity ny filohan'ny HKTB Dr. YK Pang nilaza hoe: "Ny fetin'ny divay sy divay any Hong Kong dia iray amin'ireo hetsika malaza indrindra teo amin'ny mponina sy ny mpizahatany hatramin'ny nanombohany folo taona lasa izay. Na eo aza ny fihanaky ny COVID-19 amin'ity taona ity, manantena izahay fa afaka manohy mankafy ny kolontsaina fisakafoanana tokana ao Hong Kong ny olona ary manome fahafaha-manao asa ho an'ny sehatra F & B eo an-toerana ao anatin'ity toe-karena ara-toekarena sarotra ity. Ny fandaminana ny Fetibe dia mamela antsika hahatratra tanjona roa nefa tsy hanimba ny fahasalamam-bahoaka sy ny fiarovana azy. ”
Na dia amina endrika hafa aza, ny Festival dia mbola hanolotra kinova virtoaly amin'ny filaharana fandaharana mitovy fientanentanana toy ny amin'ny andiany tena izy, ahitana sakafo sy zava-pisotro kilasy eran'izao tontolo izao. Ka na dia mipetraka any Timbuktu aza ianao amin'ity taona ity, dia afaka mandray anjara amin'ny Fetibe fanao isan-taona na aiza na aiza misy anao.
Nanampy i Dr. Pang: “Ny fetiben'ny divay Hong Kong & Dine Hong Kong dia hiezaka hamerina ny atmosfera joie de vivre fety izay nalaza tamin'ny hetsika tamin'ny alàlan'ny fanolorana fidirana amin'ny traikefa divay sy gourmet manokana natolotry ny manam-pahaizana momba izany. Manararaotra ny endrika virtoaly, hitatra amin'ny efatra andro ka hatramin'ny herinandro maromaro ny hetsika mba hahafahan'ny olona maro mandray anjara na inona na inona fotoana sy teritery ara-jeografika. ”
Mba hitehirizana ny tsiro tany am-boalohany araka izay azo atao ny hetsika ara-batana araka izay azo atao, ny HKTB dia manangana foibe an-tserasera izay hanaovana ny ankamaroan'ny programa Festival. Mpivarotra divay isan-karazany no hanome fihenam-bidy manokana sy vokatra namboarina ho an'ny Festival izay azon'ny mpandray anjara zahana sy hividy amin'ny sehatra fampirantiana virtoaly. Mandritra izany fotoana izany, mpitsikera divay sy sakafo malaza, mpahandro, ary manam-pahaizana momba ny divay no asaina hiteny amin'ny lohahevitra momba ny divay sy fandrahoana sakafo amin'ny atrikasa sy kilasy virtoaly.
Ny Hong Kong Wine & Dine Festival dia natomboka tamin'ny taona 2009 taorian'ny nanasonenan'i Hong Kong sy i Bordeaux ny Memorandum of Understanding momba ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa mifandraika amin'ny divay. Ny seho an-kalamanjana an-kalamanjana dia nanjary resabe tao an-tanàna ary nantsoina hoe iray amin'ireo fetibe iraisam-pirenena ho an'ny sakafo sy divay 10 eran-tany nataon'i Forbes Traveler.
Ny daty sy ny antsipirian'ny fetin'ny divay sy divay any Hong Kong dia ho avy ao amin'ny Birao fizahan-tany Hong Kong.
Tatitra momba ny tsenan'ny teknolojia Global 4K manadihady ny famakafakana orinasa tsy manam-paharoa amin'ny 2029 | AsusTek Corp, Samsung Electronics Corp, JVC Kenwood Corp.
Amadeus fifanarahana vaovao miaraka amin'ny Sunway Hotels & Resorts